လင်ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက် မဟုတ်တဲ့ ဘယ် ဘက်မှာပဲဘာကြောင့်အိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ – စှယျစုံသုတ
မိန်းမ က လင်ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်ရင် ယောကျာ်းက ဘုန်းကံနိမ့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး မှာ စီးပွားရေးလာဒ်ပိတ်စေတယ်ဆိုတာ တကယ်လား???
လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆို တစ်အိပ်ယာတည်း အတူအိပ် ကြရပါတယ်။မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်း ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ သာ အိပ်ခွင့်ရှိပါ တယ်..ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာပဲအိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ………ဘာကြောင့်လဲ
အမှန်ဆို အိပ်ချင်တဲ့ ဘက်အိပ်မှာပေါ့နော်…တချို့ဆို အိပ်ယာဘေးဘက် နံရံ ထောင့်ဘက် အခြမ်းကို မိန်းမသားတွေ ပိုမိုကြိုက်နှစ် သက်လေ့ရှိပါတယ်…
ဘေးမှာက နံရံ အတားအဆီး တစ်ခု ဖြစ်သလို ဒီဘက် ဘေးမှကြ အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ လင်ယောကျာ်း အဲတော့ မှ သူတို့က မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှု အပြည့်နဲ့ စိတ်ချလက်ချ အိပ်စက်နိုင်ကြတာပါ
မိန်းမက ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်လို့ ယောကျာ်းတို့ ဘုန်း လက်ရုံးဆိုပြီး ဘုန်းကံနိမ့်တယ် ဆိုတာက စိတ်နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ် ဘုန်းမနိမ့်ဘူး မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်က ဘုန်းနိမ့်တယ် “ထင်” ရင် နိမ့်ပါတယ်မနိမ့်ဘူး “ထင်” ရင် မနိမ့်ပါဘူး။နည်းနည်းများ ရှုပ်သွားသလား မသိဘူးတော်တော်လဲ ရှုပ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ် အဲဒီ “ထင်” ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန်ကြောင့်သာ နိမ့်တာပါ… ဥပါဒါန် ကြောင့် ဘေးဥပါဒ် ရောက်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်စိတ်က နိမ့်တယ်ထင်ရင် အဲဒီ စိတ်ကထင်လိုက်တာနဲ့ အကောင်းဘက်ကို အတွေးမရှိတော့ပါဘူး။
မဟုတ်တဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ စိတ်အလိုမကျဖြစ်စေပြီး လူကို ထိခိုက်စေတာပါ…အဲ့ဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ
လူကို သတ်လို့မသေတောင် စိတ်ကို သတ်လို့သေမှတော့ လူလဲ မခံနိုင်ပါဘူး…မိန်းမသားတွေဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဘယ်ဘက်မှာပဲ အိမ်ခွင့်ရလဲ ဆိုတာ အဖြေက အရမ်းကို နူးညံ့ကြင်နာကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်
မိန်းမသားတွေလဲ သိသွားပြီး နောက်ဆို ကိုယ့်လင်ယောကျာ်းနဲ့ အိပ်ရင် ဘယ်ဘက်မှာသာ အိပ်ချင်ကြပီး ရင်ခွင်ထဲတိုးချင်နေကြမှာပါ။တကယ်တော့ ဘယ်ဘက်မှာ အိပ်ရတယ်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းတရားကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ရင်ခုန်သံတွေ စတင်ဖြစ်တည်ရာ နှလုံးသားနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးနေရာ မှာသာ မိမိချစ်ခင်စုံမက်ရတဲ့ မိန်းမသားကို ထားချင်တဲ့ အတွက် ဘယ်ဘက်မှာ ထားရင်ခွင်ထဲ ထည့် အိပ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
မိန်းမသားတို့ အနေဖြင့်လည်း ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်ကလေးတွေကို နားဆင်ရင်း နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ အိပ်စက်ရတာဟာ လောကနိဗ္ဗာန် စည်းစိမ်ကို ခံစားနေရမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်စည်းစိမ်ဆိုတာဟာလဲ လူ့ဘဝမှာတင် ရရှိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်က ယူတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ ယူတတ်ရင် ရပါတယ်……။ဘဝအမောတွေ ဖြေဖျောက် တမှေးလောက်တော့
ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းကိုယ်စားပြု ရင်ခွင်ထဲ အိပ်စက်နားခိုရင်း နောင် အနာဂတ်လမ်းခရီးအတွက် အားမွေးပြီး နှစ်ဦးသား အိပ်ရေးဝလိုက်ကြရအောင်။
လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆို တစ်အိပ်ယာတည်း အတူအိပ် ကြရပါတယ်။မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်း ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ သာ အိပ်ခွင့်ရှိပါ တယ်ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာပဲအိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ…ဘာကြောင့်လဲ
ဘေးမှာက နံရံ အတားအဆီး တစ်ခု ဖြစ်သလို ဒီဘက် ဘေးမှကြ အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ လင်ယောကျာ်း အဲတော့ မှ သူတို့က မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှု အပြည့်နဲ့ စိတ်ချလက်ချ အိပ်စက်နိုင်ကြတာပါမိန်းမက ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်လို့ ယောကျာ်းတို့ ဘုန်း လက်ရုံးဆိုပြီး ဘုန်းကံနိမ့်တယ် ဆိုတာက စိတ်နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ် ဘုန်းမနိမ့်ဘူး မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းကိုယ်စားပြု ရင်ခွင်ထဲ အိပ်စက်နားခိုရင်း နောင် အနာဂတ်လမ်းခရီးအတွက် အားမွေးပြီး နှစ်ဦးသား အိပ်ရေးဝလိုက်ကြရအောင်.။
မိနျးမ က လငျယောကျြားရဲ့ ညာဘကျမှာ အိပျရငျ ယောကျြားက ဘုနျးကံနိမျ့ပွီး အိမျထောငျရေး မှာ စီးပှားရေးလာဒျပိတျစတေယျဆိုတာ တကယျလား???
လငျရယျ မယားရယျ ဖွဈလာပွီဆို တဈအိပျယာတညျး အတူအိပျ ကွရပါတယျ။မိနျးမသားတှဟော လငျယောကျြား ရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးမှာ သာ အိပျခှငျ့ရှိပါ တယျ..ဒါပမေယျ့ ဘာဖွဈလို့ မိနျးမသားတှဟော လငျယောကျြားရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးမှာပဲအိပျခှငျ့ရှိတာလဲ………ဘာကွောငျ့လဲ
အမှနျဆို အိပျခငျြတဲ့ ဘကျအိပျမှာပေါ့နျော…တခြို့ဆို အိပျယာဘေးဘကျ နံရံ ထောငျ့ဘကျ အခွမျးကို မိနျးမသားတှေ ပိုမိုကွိုကျနှဈ သကျလရှေိ့ပါတယျ…
ဘေးမှာက နံရံ အတားအဆီး တဈခု ဖွဈသလို ဒီဘကျ ဘေးမှကွ အားကိုးအားထားပွုရတဲ့ လငျယောကျြား အဲတော့ မှ သူတို့က မိမိကိုယျကို လုံခွုံမှု အပွညျ့နဲ့ စိတျခလြကျခြ အိပျစကျနိုငျကွတာပါ
မိနျးမက ယောကျြားရဲ့ ညာဘကျမှာ အိပျလို့ ယောကျြားတို့ ဘုနျး လကျရုံးဆိုပွီး ဘုနျးကံနိမျ့တယျ ဆိုတာက စိတျနဲ့သာ ဆိုငျပါတယျ ဘုနျးမနိမျ့ဘူး မဟုတျပါဘူး
ကိုယျက ဘုနျးနိမျ့တယျ “ထငျ” ရငျ နိမျ့ပါတယျမနိမျ့ဘူး “ထငျ” ရငျ မနိမျ့ပါဘူး။နညျးနညျးမြား ရှုပျသှားသလား မသိဘူးတျောတျောလဲ ရှုပျသှားမယျ ထငျပါတယျ
ဟုတျပါတယျ အဲဒီ “ထငျ” ဆိုတဲ့ ဥပါဒါနျကွောငျ့သာ နိမျ့တာပါ… ဥပါဒါနျ ကွောငျ့ ဘေးဥပါဒျ ရောကျတတျပါတယျ။ကိုယျ့စိတျက နိမျ့တယျထငျရငျ အဲဒီ စိတျကထငျလိုကျတာနဲ့ အကောငျးဘကျကို အတှေးမရှိတော့ပါဘူး။
မဟုတျတဲ့ ခံစားခကျြတှနေဲ့ စိတျအလိုမကဖြွဈစပွေီး လူကို ထိခိုကျစတောပါ…အဲ့ဒါဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေး ကဆြငျးခွငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဘုနျးနိမျ့ခွငျးပါပဲ
လူကို သတျလို့မသတေောငျ စိတျကို သတျလို့သမှေတော့ လူလဲ မခံနိုငျပါဘူး…မိနျးမသားတှဟော ဘာဖွဈလို့ ဘယျဘကျမှာပဲ အိမျခှငျ့ရလဲ ဆိုတာ အဖွကေ အရမျးကို နူးညံ့ကွငျနာကွညျနူးဖို့ ကောငျးပါတယျ
မိနျးမသားတှလေဲ သိသှားပွီး နောကျဆို ကိုယျ့လငျယောကျြားနဲ့ အိပျရငျ ဘယျဘကျမှာသာ အိပျခငျြကွပီး ရငျခှငျထဲတိုးခငျြနကွေမှာပါ။တကယျတော့ ဘယျဘကျမှာ အိပျရတယျဆိုတာ ခဈြခွငျးတရားကို ကိုယျစားပွုပါတယျ။
ရငျခုနျသံတှေ စတငျဖွဈတညျရာ နှလုံးသားနဲ့ အနီးကပျဆုံးနရော မှာသာ မိမိခဈြခငျစုံမကျရတဲ့ မိနျးမသားကို ထားခငျြတဲ့ အတှကျ ဘယျဘကျမှာ ထားရငျခှငျထဲ ထညျ့ အိပျစခွေငျးဖွဈပါတယျ
မိနျးမသားတို့ အနဖွေငျ့လညျး ကိုယျခဈြရသူရဲ့ ရငျခုနျသံစညျးခကျြကလေးတှကေို နားဆငျရငျး နှေးထှေးတဲ့ ရငျခှငျထဲမှာ အိပျစကျရတာဟာ လောကနိဗ်ဗာနျ စညျးစိမျကို ခံစားနရေမှာ အမှနျပဲ ဖွဈပါတယျ။
နတျပွညျနိဗ်ဗာနျစညျးစိမျဆိုတာဟာလဲ လူ့ဘဝမှာတငျ ရရှိနိုငျပါတယျကိုယျက ယူတတျဖို့ပဲ လိုတာပါ ယူတတျရငျ ရပါတယျ……။ဘဝအမောတှေ ဖွဖြေောကျ တမှေးလောကျတော့
ကိုယျခဈြရသူရဲ့ အသညျးတဈခွမျးကိုယျစားပွု ရငျခှငျထဲ အိပျစကျနားခိုရငျး နောငျ အနာဂတျလမျးခရီးအတှကျ အားမှေးပွီး နှဈဦးသား အိပျရေးဝလိုကျကွရအောငျ။
လငျရယျ မယားရယျ ဖွဈလာပွီဆို တဈအိပျယာတညျး အတူအိပျ ကွရပါတယျ။မိနျးမသားတှဟော လငျယောကျြား ရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးမှာ သာ အိပျခှငျ့ရှိပါ တယျဒါပမေယျ့ ဘာဖွဈလို့ မိနျးမသားတှဟော လငျယောကျြားရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးမှာပဲအိပျခှငျ့ရှိတာလဲ…ဘာကွောငျ့လဲ
ဘေးမှာက နံရံ အတားအဆီး တဈခု ဖွဈသလို ဒီဘကျ ဘေးမှကွ အားကိုးအားထားပွုရတဲ့ လငျယောကျြား အဲတော့ မှ သူတို့က မိမိကိုယျကို လုံခွုံမှု အပွညျ့နဲ့ စိတျခလြကျခြ အိပျစကျနိုငျကွတာပါမိနျးမက ယောကျြားရဲ့ ညာဘကျမှာ အိပျလို့ ယောကျြားတို့ ဘုနျး လကျရုံးဆိုပွီး ဘုနျးကံနိမျ့တယျ ဆိုတာက စိတျနဲ့သာ ဆိုငျပါတယျ ဘုနျးမနိမျ့ဘူး မဟုတျပါဘူး
ကိုယျခဈြရသူရဲ့ အသညျးတဈခွမျးကိုယျစားပွု ရငျခှငျထဲ အိပျစကျနားခိုရငျး နောငျ အနာဂတျလမျးခရီးအတှကျ အားမှေးပွီး နှဈဦးသား အိပျရေးဝလိုကျကွရအောငျ.။